Mihazakazaka Mankany Pyongyang Ny Aterineto Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Mey 2014 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, English, Magyar, Español, English
Nampidirina ho anisan'ny lalàna “miady amin'ny mpampihorohoro” ireo fitsipika [ru] ireo izay mampihatra fanarahamaso henjana ataon'ny governemanta amin'ny Aterineto Rosiana – milaza [tatitra Global Voices] ny lalàna fa tafiditra ao anatin'izany ireo bilaogera manana mpitsidika mahatratra 3000 voarakitra izay heverina ho toy ny fampahalalam-baovao be mpamaky rehetra. Tsotra ny anton'ilay fitsipika fitehirizana mandritra ny enimbolana: mba hanerena ireo orinasa Aterineto vahiny hankatò izay fampafantarana tadiavin'ny governemanta Rosiana. Ao anatin'ny fitsipika vaovao, dia hanaja ny fampiharana ny lalàna ny haba-tranonkala rehetra amin'ny fanomezana ny mombamomba sy izay ataon'ireo mpiserasera ao aminy. Na dia ho voatahiry ao Rosia aza ny ango-tserasera, dia tahaka ny vonona ny tsy hanaiky ny hanome ny mombamomba ny mpiseraserany sy ny votoaty ampidiriny, na dia izany aza, ny tambajotra goavana tahaka an'ny Facebook sy Twitter.
Nankatoavin'ny filoha Putin ny lalàna – tamin'ny 24 Aprily , niresaka [ ru ] tamina valandresaka misokatra hoan'ny daholobe mikasika ny media izy, izay nilazany mivantana fa tokony hafindra ao Rosia ireo tahirin-tserasera miaty ny zavatra momba ny Rosiana. Noho ny ahiahy ara-piarovana no mety anisan'ny antony mahatonga izany toe-javatra izany. Nandritra ny valandresaka ihany, nanamarika tsara izy fa ny CIA no mamolavola ny tranonkala ary mbola arahin'ny sampan-draharaha maso izany (ny tiany lazaina angamba dia ny nidiran'ny DARPA tamin'ny fananganana ny aterineto ).
Amin'ity lalàna vaovao ity, mafy mihitsy ny hahazo ny RuNet, raha ny filazan'ireo bilaogera sasany. Ho sarotra mety tsy ho tontosa mihitsy ny fanarahana izay notinaky amin'ny lalàna raha jerena ny tontolon'ny Aterineto amin'ny ankapobeny, hoy i Egor Kotkin nanoratra. Izany no mahatonga azy hanahy mafy fa mety ho dingana fiomankomanana hanasarahana tanteraka ny Runet amin'izao tontolo izao ihany ny fanatanterahana izany – karazana fefin-tariby vaovao. Mieritreritra ny tahaka izany ihany koa ilay mpitarika tò-tenin'ny aterineto Rosiana, Anton Nosik. Niresadresaka amin'ny fahasarotan'ny lalàna vaovao izy nandritra ny antsafa tao amin'ny fahitalavitra Rain, niresaka momba ny fahasarotan'ireo lalàna vaovao izy: